Mombamomba ahy - Site de ulrich2018 !
Tsy dia tiako loatra ny mampafantatra Aminareo ny fiainako manontolo fa sombin-tsombiny ihany no holazaiko anareo eto.
Ny anarako feno Andrianin'Arison Jemmy Ulrich
Teraka tamin'ny taona 2001 ary monina ao Ambohimanarina
Solon'anarana nampiasaiko: Vetsomena (nanomboka tamin'ny taona 2015)
Mikasika ny asa soratro
Nanomboka tamin'ny taona 2014 izany hoe teo amin'ny faha-13 taona ko izaho no nanam-paniriana ny te hanoratra voalohany taorinan'ny nahitako ny tononkalon'i Rado sy i Dox. Mba tiako koa mantsy tamin'io fotoana io ny mba ho toa an-dry zareo hoe manana boky sy manoratra tononkalo. Tsy dia tononkalo loatra anefa no nanombohako fa karazana tantara kely ihany satria kilasy fahadimy aho tamin'io fotoana io ary nifantoka tanteraka tamin'ny famoronan-dahatsoratra ny fandaharam-pianarana.
Ka lahatsoratra efatra ihany no nosoratako nandritra ireny fotoana ireny
Sombin-tantara roa sy aingam-panahy roa ihany. Samy resaka fiainana daholo no raketin'ireo lahatsoratro voalohany ireo.
Nitohy ihany ilay fiainana ka heritaona taty aoriana izany hoe teo amin'ny faha-15 taona ko no nanomboka nitsiry fitiavako ka tovovavy iray izay mponina teto an-tanana teto ihany no olon-tiako voalohany. Tamin'ny fialan-tsasatra moa no nitrangan'io ka nanam-potoana tsara aho hanoratra ny tantaram-pitiavako voalohany dia ilay tantara mitondra ny lohateny hoe "ilay Amboarako " voasoratra nandritran'ny telo volana monja ary mirakitra ny fihetsem-poko fony aho tia azy.
Rehefa taty aoriana kely na dia nisy aza ny sakana madinidinika dia tsy namela an'io nofinofiko io ho very aho fa notohizako hatrany. Mbola tsy aiko loatra moa ny manoratra tononkalo ka aingam-panahy ihany no tena nosoratako fahizay.
Heritaona taorinan'ny nanoratako an'ilay tantara iny ihany dia nanoratra ny tantaram-pitiavana hafa indray aho ka mitondra ny lohateny hoe "Anjara sa lahatra " izy io.
Volana vitsivitsy taorinan'io ahi vao tena nandinika sy nijery an'izany fomba fanoratana tononkalo sy tantara izany ka vao volana vitsivitsy monja aho no nanoratra ny tononkaloko voalohany. Tena tononkalo fa tsy aingam-panahy intsony izay hokasaiko havoaka boky atsy ho atsy.
Ny resaka tantara indray dia tsy ireo tantara telo eo ambony ireo no havoakako boky fa ilay tantara nosoratako tao anatin'ny roa volana monja mitondra ny lohateny hoe sedram-pitia no mirakitra an'io bokina tantara havoakako io.
Tsy dia faniriako loatra moa ny te ho lasa mpanoratra sy poeta fahiny kanefa moa rehefa nifantoka teo amin'ny sehatry ny literatiora aho dia hitako ihany ny tena antony mahatsara izany hoe ho lasa mpanoratra sy poeta izany.
tagPlaceholderCatégories : Momba, ahy